April 2015 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ဖေ့စ်ဘုတ်ကာတွန်း စုစည်းမှု (၃၀-၄)
Author: lubo601 | 9:07 PM | No မှတ်ချက် |
အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ---->
“ဖရဲသီး နဲ့ ဘဲဥ”
Author: lubo601 | 8:55 PM | No မှတ်ချက် |
Soe Min April 29, 2015 at 10:50am
ဆေးရုံကြီးမှာ အရေးအကြောင်းရှိ အကူအညီလိုရင် ပြောပါ လို့ ဖိတ်မန္တက ပြုထားတဲ့အတိုင်းပဲ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေထဲက နာရေးဖျားရေး မမာမကျန်းများ ရှိခဲ့သော် ဘယ်သွားလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ရွာလည်နေမှာစိုးလို့ အကြံဥာဏ်ပေးတန်ပေး၊ သင့်ရာအပ်ပို့ လုပ်တဲ့အခါလုပ်၊ နတ်လမ်းညွှန်တဲ့အခါညွှန် ၊ကူညီနိုင်သလောက် ကူညီပေးခဲ့သလို ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာများကျတော့လည်း တတ်အားသရွေ့ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ သည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျင်လည်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့သလောက် လက်ရှိခေတ်အခါ အခြေအနေမှာလည်း ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေသူတစ်ယောက်မို့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သူများထက်စာရင်တော့ ထဲထဲဝင်ဝင် သိတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်း ပါးစပ်ဖွာနေရင် ရွာပြင်ကို ရောက်ကိန်းမြင်တာမို့ ဆေးရုံနဲ့ ပတ်သက်ရင် တော်ရုံနဲ့ မရေးဖြစ်အောင် သတိထားပါတယ်။
အိပ်မက်ကို အသက်သွင်းနိုင်ခဲ့သူ (သို့မဟုတ်) စတားလုံး
Author: lubo601 | 8:52 PM | No မှတ်ချက် |
မွေးကတည်းက ခန္ဓာကိုယ် တခြမ်း အကြောဆိုင်း၍ ပါလာသည်။ အလယ်တန်း အဆင့်တွင် ပညာ သင်နေသော အခါ သူ၏ ရွဲ့နေသော မျက်နှာ တစ်ခြမ်းကို အများက လှောင်ပြောင်သည်ကို မခံနိုင်ဖြစ်ကာ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြီးထွား လှပအောင် လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်လိုသော် လည်း လောလောဆယ်တွင် အများ သရုပ် မဆောင်လိုသော နေရာများတွင်သာ ပါဝင်ခဲ့ရသည်။
Author: lubo601 | 8:47 PM | No မှတ်ချက် |
Dr.steven က MPM မှာ theory x နှင့် y ကိုရှင်းပြပါတယ်။
လူ၏ culture အရ သက်တောင့်သက်သာရှိသောအလုပ်
ဝေးလန်နေရာထက် မြို့တော်များတွင် အလုပ်လုပ်ချင်ကြတယ်။
နေပူမိုးရွာမှာလုပ်ချင်အောင် ၊ အဝေးမှာအလုပ်လုပ်ချင်အောင်
မက်လုံး (incentive) ပေးရမယ်။
Author: lubo601 | 8:35 PM | No မှတ်ချက် |
မော်စကို သွားမယ့် ခရီးစဉ် ကင်ဂျုံအန်း ဖျက်သိမ်း
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဒီအန်အေ ပြန်စစ်မည်
ဦးရွှေမန်း ကန်ဒုနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ဖို့ရှိ
နီပေါ Gorkha ဒေသမှာ အကူအညီ မရောက်သေး
ဆယ်ကျော်သက် ယောက်ျားလေးတဦး ၅ ရက်ကြာမှ ကယ်တင်တွေ့ရှိ
တောင်သမန်အင်းမှာ ငါးတွေသေဆုံး (ဓါတ်ပုံ)
ကိုပါကြီး သေဆုံးမှု ကျိုက်မရောတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေး
ထားဝယ်တွင် အိမ်ခြေ ၆၀ ကျော် မီးလောင်
နီပေါ ငလျင် ကယ်ဆယ်ရေး ကြိးပမ်းမှုအပေါ် စိတ်ပျက်မှုတွေ ပေါ်ထွက်
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ဆက်ကြေးကောက်ခံနေသော TNLA အဖွဲ့အား တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်း
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများကို သာယာဝတီ တရားရုံးတွင် စတင်ရုံးထုတ်
ဟာသ အသုတ်စုံ ( ၂၉-၄)
Author: lubo601 | 9:28 PM | No မှတ်ချက် |
'မေမေ... တီကောင်က စားလို့ရလား ဟင်'
'ခု တိတ်စမ်း သားသား... စားတုန်းသောက်တုန်းကို ရွံစရာတွေ မပြောနဲ့ အရိုက်ခံရမယ် ကြားလား'
Author: lubo601 | 9:24 PM | No မှတ်ချက် |
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၉-၄)
နီပေါ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသတွေကို အကူအညီတွေ စတင်ရောက်ရှိ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးအပါအ၀င် ပြည့်တန်ဆာပုဒ်မများနှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူများကို ကျောက်တံတား တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်
နိုင်ငံခြားသား ၂ ဦးကို မူဆယ်ရဲစခန်း ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ
ဆူဒန်ရွေးကောက်ပွဲ လက်ရှိသမ္မတ မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိ
နီပေါမှာ သေဆုံးသူ ၁၀၀၀၀ ရှိနိုင်လို့ဆို
သြစီ၂ဦး ကွပ်မြက်ခံရပြီးနောက် အင်ဒိုရောက် သံအမတ်ကို ပြန်ခေါ်
လားရှိုးမြို့ လေပြင်း နှင့် အတူ မိုးသီးများကျ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ
ရခိုင် တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေးနေရ
Author: lubo601 | 10:23 PM | No မှတ်ချက် |
Zaw Min Latt
တစ်ခါက တာဝန်နဲ့ ရပ်ဝေးကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတစ်ဦးစီကို သူ့မိန်းမ ပို့လိုက်တဲ့ စာရောက်လာတယ်။
“မောင်ရေ။ မောင်နဲ့မတို့ အရမ်းတောင့်တနေတဲ့ရင်သွေးလေးကို အောင်မြင်စွာ မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပြီသိလား။ မောင်သိပ်လိုချင်တဲ့ သားသားပေါ့ မောင်ရဲ့။ မောင်အရမ်းပျော်သွားပြီမဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့်မောင်ရယ် မကနို့မထွက်တော့ နီဂရိုးမတစ်ယောက်ရဲ့နို့ကို တိုက်လိုက်ရတယ်သိလား။ ဒါကြောင့်ထင်ပါတယ် မောင်ရယ် ကလေးက အသားမည်းတယ်”
Author: lubo601 | 10:22 PM | No မှတ်ချက် |
M. Zaw Aung
(၁) တစ်သက်မှ တစ်ခါလုပ်မည့်အလှူဖြစ်၍ ကောင်းကောင်းလေး လုပ်လိုခြင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်က မိမိသားသမီးများကို ရှင်ပြုနားသမင်္ဂလာ ဆင်ယင်ကျင်းပ ပေးကြသည်မှာ အစဉ်အလာ ဖြစ်၏။ သားဖြစ်သူ အသက် (၂၀) ပြည့်လျှင် ပဉ္စင်းခံပေးသည်။ မိမိ၌ သားသမီးမရှိသူများက မိမိနှင့် ဆွေမျိုးနီးစပ် တော်သူများကို သော်လည်းကောင်း၊ ဆွေးမျိုးမတော်လျှင်ပင် အခြားသူတစ်ဦးဦးကိုသော်လည်းကောင်း ရှင်ပြု၊ ပဉ္စင်းခံ ပြုလုပ်ပေးကြ၏။ ရှင်ပြုပဉ္စင်းခံပြုလုပ်ရန် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူများအား အခြားသူတစ်ဦးဦးက ပြုပေးသည်လည်း ရှိသည်။
မျက်မမြင်ပုဏ္ဏား -ဖေ့စ်ဘုတ် သုံးခြင်းအကြောင်း
Khun Saing April 27, 2015 at 8:11pm
ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာ တလ-ရှိနေတုန်း ကျောင်းသားများ ပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးသပိတ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာမို့ မိတ်ဆွေတွေအသိချင်ဆုံးအများဆုံးအမေးခံရတဲ့မေးခွန်းတခုကတော့ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေ ရန်ကုန်ဝင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၇၄-၅-၆ က ကျန်သေးသော ရွယ်တူမိတ်ဆွေတွေက ငယ်ပေါင်းလို။ ၈၈တုန်းကလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေက-အကိုကြီးတယောက်လို။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၈-၄)
Author: lubo601 | 10:18 PM | No မှတ်ချက် |
ကျေးရွာတိုင်းနီးပါး မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် အောက် ခြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများက ထင်သလို စီမံနေ
မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲကာ ဓါးကိုင်ရမ်းကားနေသူအား ၀င်ရောက် ထိန်းသိမ်း ဖမ်းဆီးရာမှ ရမ်းကားသူ သေဆုံး
အင်ဒို သေဒဏ်ကျ အကျဉ်းသားတွေရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်
ကျောက်မဲ မြို့ နယ် အတွင်း ရှိ လျှိူ တစ် ခု တွင် တွေ့ရှိ ရသော ရုပ် အလောင်းများကို ကောက်ယူ၍ မန္တလေး ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်
နီပေါ ငလျင် သေဆုံးသူ တစ်သောင်းအထိရှိနိုင် ဟု နီပေါ ၀န်ကြီး ချုပ် ပြော
AA သောင်းကျန်းသူများ ကိုင်ဆောင်သည့် လက်နက်များ သိမ်းဆည်းရမိ
စစ်တွေအဖွဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအား ဆေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာများ ကူညီပေး
လယ်မြေအငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားရာမှ ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက် ထိုးခုတ်ကြသဖြင့် (၁)ဦးသေ၊ (၂)ဦးဒဏ်ရာရ
နီပေါ ငလျင်ဘေးသင့်သူတွေ ၈ သန်း ရှိနေပြီ
မြန်မာဆိုင်ရာ ကန်မူဝါဒ သုံးသပ်ဖို့ McCain Institute မှာ ဆွေးနွေး
Author: lubo601 | 9:55 PM | No မှတ်ချက် |
အောင်ထက် - မိုင်ပေါင်းကုဋေ
Author: lubo601 | 9:37 PM | No မှတ်ချက် |
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၇-၄)
Author: lubo601 | 9:36 PM | No မှတ်ချက် |
ထိုင်းမှာ ဆင်စွယ် ၃ တန်ကျော် ထပ်မံ ဖမ်းဆီးမိ
မီးလောင်ကျွမ်းထားသည့် အမျိုးသမီးအလောင်းနှင့် ပါတ်သတ်သည့် အထောက်အထားများ ရဲတပ်ဖွဲ့ ထုတ်ပြန်
သနပ်ပင်မြို့နယ် ကျေးရွာ ၁၀ ရွာခန့် သောက်သုံးရေအခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရ
ကယားပြည်နယ်မှ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင်သူများ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရ
မတရားသိမ်းဆည်းခံ လယ်ယာမြေ ပြန်လည်ရရှိရေး တောင်သူ ၄၀၀ ကျော် ဆန္ဒပြချီတက်
မသန်စွမ်းသူငယ်ချင်းတစ်ဦးကို သုံးနှစ်ကြာကျောပိုးကျောင်းတက်ခဲ့သူ ဂုဏ်ပြုခံရ
နီပေါငလျင် သေဆုံးသူ ၃၂၀၀ ရှိလာပြီး လူပေါင်း ၆၅၀၀ ဒဏ်ရာရ
အိမ်ဖြူတော် အီးမေးလ်စနစ် ထိုးဖောက်ခံရမှု အိုဘားမား အီးမေးလ်များ အဖောက်ခံရ
ကိုးကန့်ဒေသ နောက်ဆုံး အခြေအနေ
Author: lubo601 | 10:12 PM | No မှတ်ချက် |
ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဖောက်ခိုးနေသော သူခိုးကို ရဲသားက လက်ပူးလက်ကြပ်မိသွားသည် ။
ရဲသား - မင်းဘာဖြစ်လို့ ဒီဆိုင်ကိုမှ ဖောက်ခိုးရသလဲ
သူခိုး - ကျတော့အိမ်နဲ့ ဒီဆိုင်က နီးလို့ပါ ၊ သိတဲ့အတိုင်း ခေတ်ကမကောင်းတော့ အိမ်ကို ပစ်ပြီး အကြာကြီး မသွားချင်လို့ပါ….
Author: lubo601 | 9:56 PM | No မှတ်ချက် |
အင်းလေးကန်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း များစွာကတည်းက သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်တည်လာတဲ့ ရေကန်၊ ရာဇ၀င် အဆိုအရ အလောင်းစည်သူ မင်းကြီးရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်ကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ရေကန်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ အင်းလေးကန်ကတော့ ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ ပြယုဂ်ကို အလှဆင်ထားတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ အင်းလေးကန်ဟာ တောင်-မြောက် ၁၄ မိုင်၊ အရှေ့-အနောက် ၇ မိုင်ခန့်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။
၁၉၉၄ ခု၊ ဇူလိုင်လ။
ထူးရာစိုး လဘက်ရည်ဆိုင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းထိပ်၊ မာနယ်ပလော။
မေးမြန်းနှုတ်ဆက်သူကို ကျွန်တော်ကြည့်သည်။ ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်၊ ပြောက်ကျားစစ်အကျီ၊ စစ်ဘောင်းဘီ၊ ရာဘာညှပ်ဖိနပ်။ အသားဖြူဖြူ၊ ပါးရိုးနားရိုး ကျကျ၊ ခနကိုယ် ခတ်ပါးပါး။
ညံ့ဖျင်းသော အစိုးရ နောက်ဆက်တွဲ
'' စစ် ''
တုံးလုံး ပက်လက် … !
ဆရာချစ်ဦးညို စင်္ကာပူ စာပေဟောပြောပွဲမှာ ရွတ်သွားတဲ့ကဗျာတိုလေးကို ဒီနေ့ လောက်ကိုင် စစ်ပွဲအခြေအနေနဲ့တွေးပြီး ရင့်နစ်စွာနဲ့ အမှတ်ရနေဖြစ်တယ်။
Author: lubo601 | 9:09 PM | No မှတ်ချက် |
ယနေ့ နံနက်ပိုင်း အမြန်လမ်းတွင် ဟိုင်းလပ်ယာဉ်အား ''မန္တလာမင်း'' နောက်မှ ၀င်တိုက်မိသဖြင့် (၈)ဦး သေဆုံး (၁၄)ဦး ဒဏ်ရာရ
အမြန်လမ်းဘေးမှာ ရပ်ထားသည့် ''နယူးစိန်ဌေးလှိုင်'' ခရီးသည်တင်ယာဉ်အား ယာဉ်ငယ်တစ်စီး ဝင်ရောက်တိုက်မိ
ရပ်စောက်မြို့တွင် တရားမဝင်သစ်စက်များပြား၊ ဒေသခံ များစုပေါင်းတိုင်ကြား မှုကြောင့် သစ်ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းထားရ
အစာအဆိပ်သင့်သေဆုံးကြောင်း ရဲကိုတိုင်ကြားမှု စစ်ဆေးရာမှ လူသတ်မှုပေါ်ပေါက်
တံတားပေါ်မှ ထော်လာဂျီ ချောင်းထဲပြုတ်ကျ၊ နှစ်ဦးသေ၊ ခြောက်ဦးဒဏ်ရာရ
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်ပွဲသတင်းတွင် ဘာသာရေးအရ အထင်အမြင် လွဲမှားစေနိုင်သည့် ဓာတ်ပုံဖော်ပြခြင်း အတွက် The Voice သတင်းစာ တရားဝင်တောင်းပန်
နီ​ပေါ​ငလျင်​ကြောင့် လူတစ်ထောင့်​ရှစ်​ရာ အနည်း​ဆုံး သေ​ဆုံး
သန်လေးကို ဟာသ အသုတ်စုံ (၂၅-၄)
Author: lubo601 | 7:39 PM | No မှတ်ချက် |
ရုံးကပြန်လာတဲ့ အဖေကို သားက ပြောတယ်... ...
"အဖေ.. အဖေ့ကြက်ဖကြီး သေသွားပြီဗျ"
"ဟမ်... ဘာလို့ သေတာလဲ"
အန်တီ စိန်မမမောင်ရဲ့ သဇင်ပန်းစိုက်နည်း
Author: lubo601 | 7:32 PM | No မှတ်ချက် |
Khin Nyein Chan Oo
ဖွားစိန်သဇင်စိုက်နည်းလေးပြောပြမယ်နော် ဝယ်ရတဲ့သဇင်တွေက တောဥတွေဆိုတော့ တလုံးချင်းရအောင် အရင်သန့်ရတယ် ရလာတဲ့သဇင်ဥလေးတွေကို အမြှစ်ညှပ်ပေးရတယ် တုံးတိကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော် ညှပ်ထားပြီးသားဥလေးတွေကို သွားထိုးတံလေးနဲ့ သဇင်ဥရဲ့ သုံးချိုးတစ်ချိုးလောက်ကနေ ထိုးပြီး ရေချထားတဲ့ သဇင်တိုင်ပေါ်မှာ ခပ်ထောင်ထောင်လေးစိုက်လိုက်တယ်လေ။
Author: lubo601 | 7:18 PM | No မှတ်ချက် |
ဖြန်းးးး!!!! ကနဲ အမေရိုက်ချပလိုက်တယ်။ (၈) တန်းကျောင်းသူဘဝတုန်းကပါ။
စာပြန်ရေးနေတာ ပြန်မချစ်နိုင်တာကို ရိုးရိုးမရေးဘဲ
Author: lubo601 | 7:09 PM | No မှတ်ချက် |
လက်တင်အမေရိက ရှိ ဟေတီကျွန်းနိူင်ငံတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဂျန်န၀ါရီ ၁၂ ရက်က မြေငလျင်ကြီး လှုပ်ခဲ့မှုကြောင့် လူ ၂ သိန်း ခန့်သေဆုံးပြီး ၁.၅ သန်း အိုးအိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ စဖြစ်သည့် အချိန်မှ နောက် ၃ နှစ် အတွင်း နိူင်ငံတကာရှိ အလှုရှင်နိူင်ငံများ၏ စုစုပေါင်း လှုဒါန်းငွေသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၉.၅ ဘီလီယံ ခန့်ရှိပြီး အမေရိကန်သမတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန် ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်၍ ကယ်ဆယ်နေရာချ ထားရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
Author: lubo601 | 7:08 PM | No မှတ်ချက် |
သူ ပုန် ကြီး
ဓာတ်ငွေ့ သိုက်တွေကို စကားလုံးအရ ပိုင်ဆိုင်ပြီးမှ
ဖယောင်းတိုင်ကို ချွေတာထွန်းနေရတာ ခက်တယ်။
The World's Tallests Statues
Author: lubo601 | 7:02 PM | No မှတ်ချက် |
Statues are built as celebrations of gods, historical events and important personalities. The tallest try reach the sky and make you take notice of what they are commemorating. They are also works of art, and can take years to build. Here are some of the grandest ones ever built.
ကျွန်မတော့ ပြောပီနော်..(လူတွေကို) သိစေချင်တာပါ..
Ma May Moon added2new photos.
ကျွန်မတော့ ပြောပီနော်..(လူတွေကို) သိစေချင်တာပါ.. ကျွန်မ ဒါတွေ ပြောလို့ ကျွန်မ အတွက် မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်ရှားမယ် ဆိုလည်း ကျွန်မ စာသင်စားပါ့မယ် (သိခဲ့တာမြင်ခဲ့တာတွေ) ပြောချင်တယ်.. ကျွန်မ ဘာကြောင့် ဒီအစိုးရကို မကြိုက်သလဲဆိုတာ..
ကျွန်မပိုစ့်ကို ရှယ်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်က ပြောတယ်..
မြန်မာသစ်တော့ အရင်က ၇၅% မှ ယခုအချိန်မှာ.. ၁၅% ပဲရှိတော့တယ်တဲ့.. ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေ မသိပေမယ့်.. ဒါအမှန်ပါပဲ.သယံဇာတ.. ဘာဆိုဘာမျှ မရှိတော့တဲ့.. မြန်မာပြည်ကို အာဏာရရင် လွှဲယူပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် သိပ်ကို risk များလွန်းလှပါတယ်..
အသံမကျက်မိတော့ ရွှေအချင်းချင်း တရုတ်ထင်
Author: lubo601 | 9:04 PM | No မှတ်ချက် |
မနက်တိုင်း ၈ နာရီခွဲ အစည်းအဝေးတက်ရတာ အလွန်ပျင်း။
အလုပ်အကြောင်းတွေ ပြောနေကြတာလေ၊ အဲ့ဟာမျိုးတွေ ကိုယ်က စိတ်မဝင်စား။
နိုင်ငံရေးလေးဖြစ်ဖြစ်၊ ဘော်လုံးပွဲအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ကောင်မလေးတွေအကြောင်းဖြစ်ဖြစ် ပြောတယ်ဆိုတော်သေး
အမယ်... ခုမှကြည့်မိတယ်၊ အစည်းအဝေးခန်းထဲက စားပွဲက အသစ်ဟ ...
Thorn Nay Soe
အတ္တမှဝေးရာဆီသို့။ ။ (မင်းဒင်)
လူချင်းတရံတဆစ်မျှဆုံတွေ့ဖူးခြင်းမရှိပဲ၊ အွန်လိုင်းဖေ့ဘွတ်မှတဆင့်ခင်မင်ရင်းနှီးနေသည့် စာရေးဆရာမကြီး
ဒေါ်ခင်သူသူဝင်းထံမှ၊ လက်ဆောင်အဖြစ်အမှတ်တရပေးပို့သော၊ သူ့လက်ရာစာအုပ်နှစ်အုပ်သည်၊ ရန်ကုန်မှသည်မိုင်ထောင်ချီခရီး နှင်ခဲ့ပြီးနောက်၊ဖူးခက်မြို့ဆီသို့ချောမောစွာ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့လေသည်။
သို့သော်၊ ထိုစာအုပ် နှစ်အုပ်ရောက်လျှင်ရောက်ခြင်း ကျွန်တော်မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ချေ။
iOS Device ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျသ်ကျင်ကိုင်တွယ်ကြရအောင်
Author: lubo601 | 8:50 PM | No မှတ်ချက် |
အိုင်တီ လမ်းညွှန်‎IT-Guide (အိုင်တီလမ်းညွှန်)
စာအုပ်အမည်.....iOS Device ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျသ်ကျင်ကိုင်တွယ်ကြရအောင်
Free4iOS မှ တင်ဆက်သည်။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၄-၄)
Author: lubo601 | 8:49 PM | No မှတ်ချက် |
ပြည်သူ့ရှေ့မှောက် တရားစီရင်ရေး ဖြစ်ဖို့လိုအပ်
မော်မထူးချောင်းဝ၌ ရွှေတူးဖော်မှု ကန့်ကွက်သည့် ဒေသခံများအား အစိုးရစစ်တပ် ခေါ်ယူသတိပေး
ကလေးကုန်ကူးဂိုဏ်း ၆ ဂိုဏ်းကို တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီး
မေဝယ်လ်သာနှင့် ပက်ကွိုင်ယိုတို့၏ လက်ဝှေ့ပွဲလက်မှတ် တစ်စောင်တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝဝ အထိ စံချိန်တင်မြင့်တက်
နွားသေသားကိုဝိုင်းကိုင်ပြီး လှီးဖြတ်ရာမှ အနာများဖြစ်လာ
နတ်မောက်မြို့နယ် ရွာသစ်ကျေးရွာတွင် ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ ဖြစ်ပွား
UMFCCI ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းအောင်ကို ကန် အရေးယူပစ်မှတ်က ပယ်ဖျက်
ကရင်ဒုက္ခသည်ကြောင့် သြစီမြို့မှာ စီးပွားဖြစ်ထွန်း
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် အသုံးပြုရန် မြန်မာငွေစက္ကူအတု ၃၆၉ သိန်းကို ထိုင်းလေယာဉ်ဖြင့် သယ်ဆောင်လာသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများကို စုံစမ်းစစ်ဆေး
၃၄ မီနီဘတ်တစ်စီးက လမ်းဘေးရပ်ယာဉ်လေးစီးအား ၀င်တိုက်
ချွန်းညိုရေလှောင်တမံ မြေသိမ်းမှု (ရုပ်/သံ)
ကမ္ဘာ့​ဘဏ်​က မြန်မာ​ကို ဒေါ်လာ သန်း​၁​၆​ဝဝ​ဖိုး အကူအညီ​ပေး
Author: lubo601 | 8:25 PM | No မှတ်ချက် |
"ဒေါက်တာ ကျနော့်ကို တစ်ခု ကူညီပါအုံး"
"ဒီလိုပါ . . . ညညအိပ်တဲ့အခါကျရင် ကျနော့်ကုတင်
အဲဒါ ထပြီး ကုတင်အောက် ဆင်းကြည့်ရင် ဒီကောင် ကုတင်
ပေါ် ရောက်နေပြီလို့ ထင်ပြန်ရော။
ရာမမင်းသားဟာ မယ်သီတာကို ဘယ်တုန်းကမှ မချစ်ခဲ့ပါဘူး။
Author: lubo601 | 8:24 PM | No မှတ်ချက် |
Moe Nge Aung
“ရာမမင်းသားဟာ မယ်သီတာကို ဘယ်တုန်းကမှ မချစ်ခဲ့ပါဘူး”
ကိုယ်က အဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကို ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ လင်္ကာဒီပချစ်သူစာအုပ် လွမ်းမိုးမှုကို ခံနေရတယ်လို့ ပြောရင်လည်း ကိုယ်မငြင်းပါဘူး။
Author: lubo601 | 8:20 PM | No မှတ်ချက် |
လေ့လာချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာစာအုပ်(၁၀) အုပ် (မြန်မာ) နှင့်Structural Engineer ကျောင်းဆင်းစတွေအတွက် အဓိကလေ့ လာဖို့ လို့ညွှန်းထားတဲ့ ဆရာဦးညီလှငယ်ရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် (အင်္ဂလိပ်) လိုတစ်အုပ်တစ်အုပ်တင်ပေးထား ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဘူးလက် (ဦး) လှဆွေသို့
Author: lubo601 | 8:11 PM | No မှတ်ချက် |
လွှတ်တော်အမတ် ဘူးလက်လှဆွေ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အဖွဲ့ချုပ် နှစ်ခုလုံးကို တိုက်ခိုက်ချင်ဇောနဲ့ တကသ ခွပ်ဒေါင်းအလံကို အင်အယ်လ်ဒီအလံလို့ ပြောလိုပြောပြီး ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် တပ်မတော်သားတွေ နဲ့ လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲ အကြောင်းပြုပြီး ရန်တိုက်ပေးတဲ့ အောက်တန်းကျကျ အောက်လမ်းနည်းကို မရှက်မကြောက် သုံးတာကို တူမလေး ငြိမ်းချမ်းမေက ချက်နဲ့လက်နဲ့ ထောက်ပြစိမ်ခေါ်လိုက်တာ အားရပါးရ ရှိလှတယ်။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၃-၄)
Author: lubo601 | 8:10 PM | No မှတ်ချက် |
တာချီလိတ်မှ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားတစ်ဦး ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရင်း မိုင်းဖြတ်၌ အသတ်ခံရ
ချီလီမှာ မီးတောင် ပေါက်ကွဲ
မြန်မာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၁ ဦး ဘန်ကောက်တွင် တိုက်ပေါ်က ပြုတ်ကျသေဆုံး
ကိုပါကြီး အသတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူကို ထောင်ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်
ဆယ်ကျော်သက်အား အဓမ္မပြုကျင့်ဖို့ ကြိုးစားသည့် တပ်မတော်သား ထိုက်သင့်သော ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ ခရိုင်တရားရုံး သို့ ရွာသားများ တိုင်တန်း
ယာဉ်နှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိုင် ပွတ်တိုက်မိသဖြင့် သေဆုံး/ဒဏ်ရာရ
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများကို သာယာဝတီတရားရုံးပြောင်းစစ်ရန် အမ်ိန့်ချ
ကန့်ဘလူမြို့နယ်တွင် လူ ၂ဝဝ အစာအဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွား
အကူတောင်းရာက အကြမ်းဖက်ဖို့ စီစဉ်တာကို ရဲတွေသိသွား
မဖြိုးဖြိုးအောင်နဲ့ ကျောင်း သားနှစ်ဦးကို အမှုတွေထပ်တိုးဖွင့်
တိုက်ပွဲကြောင့် ရခိုင်ဒုက္ခသည် ၄၀၀ နေရပ်တိမ်းရှောင်
အသက် ၂ဝ ကျော်လောက်က 'ဂျူး' ရဲ့ 'မရှိမဖြစ်မိုး' ဝတ္ထုကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။
နောက် မကြာပါဘူး... အဲ့ဒီဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ပါလေရော...
အဲဒီထဲက ဇာတ်ကောင် Essential Moe ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌန်ကို သဘောကျတယ်။
မှတ်မိနေတာက အရပ်မြင့်တယ်၊ ယောက်ျားရှပ်ကို ဝတ်လေ့ရှိတယ်၊ ယုံကြည်ချက်ပြင်းတယ်၊
မူလတန်း ပညာရေးအတွေးအခေါ် နှင့် အယူအဆ ၁၅
Author: lubo601 | 8:48 PM | No မှတ်ချက် |
မင်းခက်ရဲ (Min Khet Ye)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားခြင်း ( self-esteem )
Self-esteem ဆိုတာ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်လေးစားခြင်း ၊ တန်ဖိုးထားခြင်း ၊ ယုံကြည်ခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။ အဲဒီလို သဘောမျိုးရှိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီက ကလေးတွေမှာ ပျောက်ဆုံးနေ တာကို တွေ့ ရမယ်။ ဒီလို ပျောက်ဆုံးနေခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာရေးစနစ်အတွင်းက သင်ကြားပုံ ၊ ကလေးတွေအပေါ်ကို တန်ဖိုးထားအကဲဖြတ်ပုံတွေကြောင့်ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ဘူး။ နောက်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ သင်ကြားပုံ ဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေကို ကျက်မှတ်ရမယ့် မေးခွန်းအရှည် ၊ အတိုတွေအတွက် စာခေါ်ပေးတာ ၊ ကလေးတွေက လိုက်ပါ ရေးမှတ်ရတာ ( အထူးသဖြင့် အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်းတွေမှာ ပိုလုပ်ကိုင်ရပါတယ် ) တွေကလည်း ကလေးတွေရဲ့ အမိန်းနာခံမှုကို တိုးတက်စေတယ်။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ လုပ်ကိုင်မှုကို လျော့ကျစေတာပါပဲ။ ဒီလို သင်ကြားမှုပုံစံ နဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေက ကလေးငယ်တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်းဖိုးထားခြင်းကို ပျောက်ဆုံးစေတယ်။
Author: lubo601 | 8:40 PM | No မှတ်ချက် |
အသိပညာရှာမည်၊ အလုပ်လုပ်မည်ဟူသော ခိုင်မာသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စာအုပ်သုံးအုပ် ခရီးဆောင် အိပ်တွင်းထည့် ရန်ကုန်တက်လာခဲ့သူမှာ ကိုဇော်ဇော်ဖြစ်သည်။ သို့သော် စစချင်း ဆောက်နှင့်ထွင်းဆိုသလို ဘ၀သည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့ရသည်။ ခြေထောက်တွင် ၀ဲများ ထူလပျစ် ပေါက်အောင် အလုပ်မျိုးစုံ ပတ်ဝန်းကျင် မျိုးစုံတွင် ကျင်လည်ရင်း ကိုဇော်ဇော်တစ်ယောက် မောပန်းချိန်ပင် မရခဲ့။
ပိုနေသောထမင်းအကျန်များအား သွန်ပြစ်ဖို့လုပ်မိလိုက်စဉ် မျက်လုံးထဲသို့ပုံရိပ်တစ်ချို့ ထင်ဟပ်၍ လာလေသည် ။ အစာရေဆာမလုံလောက်ငှ၍ အဟာရချို့တဲ့နေသည့် နိုင်ငံတစ်ခုဆီမှပုံရိပ်များပင် ။ ရုတ်တရက်ကြီးပေါ် လာသည့် မြင်ကွင်းများသည် ကျွန်မ၏ သတိလက်လွှတ်ဖြစ်သွားခြင်းအား သတိပေးလိုက်လေသည် ။
Author: lubo601 | 8:14 PM | No မှတ်ချက် |
Pyae Sone Aung‎ အွန်လိုင်းပေါ်မှ ကုသခြင်း-TREATMENT FROM ON LINE
ခေတ်အလိုက်ပေါ်လာကြတဲ့စက်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ကြ စစ်ကြပြီး ရောဂါရှာ မတွေ့တော့ ရီစရာများဖြစ်နေလား၊ စိုးရိမ်စရာများဖြစ်နေမလား၊ အံ့သြစရာတွေရောဖြစ်နေမလား၊ စိတ်ဓါတ်ကျစရာတွေများဖြစ်နေမလား။ရောဂါအမည်ဖေါ်မရသေးဝေဒနာက ပိုဆိုးလာတာတွေလဲအများကြီး။ ဒီလိုနဲ့ရောက်လာကြတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကမနဲ။ပြောနေကျစကားကိုပဲပြန်ပြောပြရရင် လူတိုင်းရဲ့ ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ စက်တွေက ရောဂါနဲ့ခံစားမှုကို အသိဆုံးလို့ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်နေတယ် ဆိုတာ ကိုယ်ကပဲသိတာပါ ဘယ်စက်ကမှမသိနိုင်ပါဘူး။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၂-၄)
Author: lubo601 | 8:12 PM | No မှတ်ချက် |
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် ကျွဲလှည်းအား ကားမှ ဝင်ရောက်တိုက်မိ
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကန်ဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံကျော် မြန်မာရရှိ
KNLA တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦး မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွား
သက်ကြီးရွယ်အိုဇနီးမောင်နှံ ဓါတ်ပုံများ အချစ်စစ်၏ပြယုဂ်အဖြစ် အွန်လိုင်းတွင်ပျံနှံ့
ထိုင်းငါးဖမ်းလှေ ပေါက်ကွဲ မီးလောင် မြန်မာအလုပ်သမား၂ဦးသေဆုံး၊ ၅ဦး မီးလောင် ဒဏ်ရာရ
Al Qaeda ခေါင်းဆောင်ကို ထောင်နှစ် ၂၀ ချမှတ်
ကရင်နီ မီးဘေးဒုက္ခသည်တွေ အကူအညီလိုနေ
အင်းလေး ဖောင်တော်ဦး ဘုရားဝန်းကျင်ရှိ ရွာများသို့ သွားသည့်လမ်း ရေမရှိသည့် အတွက် စက်လှေများ ဖြတ်သန်း မရဖြစ်နေ
လှေတိမ်းမှောက်အောင် ကပ္ပတိန် လုပ်တာလို့ဆို
ထိုင်းငါးဖမ်းလုပ်ငန်း စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်ဖို့ EU ရာဇသံပေး
ထိုင်းမှာ ဆင်စွယ်ပိုင်သူတွေနဲ့ ရောင်းဝယ်သူတွေ မှတ်ပုံတင်ဖို့ရက် ပြီးဆုံး
ဒေါ်ခင်ဝင်းသေဆုံးမှုကို လူသတ်မှုအဖြစ် ရဲက အမှုဖွင့်
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၂၁-၄)
Author: lubo601 | 10:25 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 10:14 PM | No မှတ်ချက် |
ဦးမြင့် ခိုင် စိတ်ပညာ
ဖေါင်းပိန် ကမ္မဋ္ဌာန်း ရှု့မှတ်နေတဲ့ ယောဂီဟာ တခါတရံမှာ ခန္ဓာကိုယ်က ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မခံသာတဲ့
ခံစားမှု့တွေကြောင့် ဖေါင်းပိန်ကို ရှု့မှတ်မရ ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဝိပဿ နာဆိုတာ ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်
ရာကိုရှု့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မခံသာတဲ့ ထုံကျင် ကိုက်ခဲ ယားယံ တောင့်တင်း စတဲ့
ခါးအောက်ပုိုင်း နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း (သို့မဟုတ်) Low Back Pain
Author: lubo601 | 10:13 PM | No မှတ်ချက် |
ခါး အောက်ပိုင်း နာတာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဖြစ်လည်း များကြပါတယ်။ ဘာမှန်းမသိလို့ခါးနာတာ ကို လျစ်လျူရှုမိတာလည်း ရှိတတ်သလို အစိုးရိမ်လွန် နေရတာလည်း ရှိတတ်ကြတာမို့ ခါးနာရတဲ့အကြောင်း ရင်းလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ဘာကြောင့် ခါးအောက်ပိုင်း Low Back Pain ရတတ် တာလဲ။
Pe Ter Pau
သိပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ မာန်နတ်ဆိုတာ အခုမှ စုံစုံလင်လင် သိခွင့်ရတာ
၁-မာရ်ငါးပါးဆိုတာ မာရ်နတ်ငါးယောက်ကိုပြောတာလား ??
Author: lubo601 | 10:08 PM | No မှတ်ချက် |
Soe Min April 19, 2015 at 11:04am
ငါးကန်ထဲမှာ ပလုံစီထနေအောင် အောက်ဆီဂျင်ပေးပြီး မွေးထားတဲ့ ရွှေငါးကလေးများဟာ မီးပျက်ပြီဆိုတာနဲ့ ပါးစပ်ကလေးတွေ ဟစိဟစိလုပ်ပြီး ရေမျက်နှာပြင်ပေါ် ပေါ်လာသလိုပဲ ကိုယ့်သမီးအလိမ်မာလေးဟာလည်း နွေခေါင်ခေါင် မီးကလေးများ ပျက်မှဖြင့် ပူလှချည်ရဲ့ လောင်လှချည်ရဲ့ဆို ဘယ်အိမ်မှာ မီးလာသလဲ။ မီးလာတဲ့အိမ်ကို ပြေးဖို့ အထုပ်ပြင်တော့တာပါပဲ။ အင်ဗာတာတွေအားကိုးနဲ့ မှောင်မှာကို သည်လောက်မကြောက်သော်ငြားလည်း အဲယားကွန်းဖွင့်လို့မရမှာကိုတော့ မခံစားနိုင်ဘူးတဲ့။ အဲ့လောက်ကြီးလည်း မဟုတ်သေးပါဘူးလေ။ သူ့အဖေ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို အဲယားကွန်းကို မဆိုထားနဲ့ ပန်ကာတောင် အိမ်မှာ မရှိလို့ ယပ်တောင်ကလေး တဖြတ်ဖြတ်ခတ်အိပ်ရတာ မဟုတ်လား။ သူကတော့ အံ့သြတကြီး “အဲယားကွန်းကတော့ ထားပါတော့။ ပန်ကာက ဘာလို့မရှိရတာလဲ။ ဈေးလည်း မကြီးပဲနဲ့။” လို့ဆိုတော့ ဟိုးတုန်းက ခေတ်အခါမှာ ပန်ကာဆိုတာတောင် အိမ်တိုင်း မရှိတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြရပါတယ်။
Author: lubo601 | 10:02 PM | No မှတ်ချက် |
ရခိုင်သောင်းကျန်းသူ ၅ ဦး ဖမ်းဆီးရမိ
တရားမ၀င် ငါးမိုင်းခွဲလှေ တစ်စီးအား ရေတပ်မှ ဖမ်းဆီးရမိ
ရခိုင်စစ်ပြေး ရှောင်သူများအား ကူညီသွား ပေးမယ့်သူများ တားမြစ်ခံရ
သံတွဲမြို့နယ်တွင် ပျံလွန်တော်မှုသွားသော မပုပ်မသိုး ဆရာတော်နှစ်ပါးမှ ဓါတ်တောက်၍ လူပေါင်း ထောင်ချီ လာရောက် ဖူးမျှော်
ချင်းပြည်နယ်မှာ ပေ(၅ဝဝ)ခန့်အနက်ရှိ ချောက်ထဲသို့ ယာဉ်တစီး ထိုးကျ တိမ်းမှောက်၍ သေဆုံး/ဒဏ်ရာရ
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကျင်းပ
ကျေးလက်ဆေးခန်းရှိသော်လည်း ဆရာမ မရှိသည့် အတွက် ဒေသခံများ အခက်အခဲဖြစ်
စင်္ကာပူ ကုမ္ပဏီက မြန်မာမှာ လျှပ်စစ်စက်ရုံတည်
ဥရုချောင်း ပြန်ဆယ်ဖို့ လုပ်ငန်း နှောင့်နှေး
၀ါရှင်တန် ပို့စ် သတင်းထောက် သူလျှိုမှုနဲ့ စွပ်စွဲခံရ
မြန်မာအလှူသွားသည့် ထိုင်းမိသားစု ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး ၁ ဦးသေ ၇ ဦးဒဏ်ရာရ
ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်မှု တနှစ်ပြည့် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ ဂါရ၀ပြု
ဦးဝင်းတင်အတွက် အပြာရောင် အင်္ကျီဝတ်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တော် သတင်းစာ ရေးသား
သမီးလေးအတွက် – ဘဝပေးသင်ခန်းစာများ
မေမေက ပညာရှိတွေနဲ့တော့ ဘယ်ယှဉ်နိုင်ပါ့မလဲ သမီး၊ ဒါပေမယ့် မေမေ့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ သင်ခန်းစာတွေ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးမေမေနားလည်ခဲ့တာက မေမေတို့အားလုံးဟာ တူညီတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါပဲ။ သေခြင်းတရား၊ သစ္စာဖောက်ခံရခြင်းတွေ၊ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း၊ နှလုံးသားနာကျင်ခံစားရခြင်းတွေ၊ ဖျားနာခြင်းတွေနဲ့ ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲတွေပေါ့။
Queen - Live At Wembley Stadium (full version) - Best concert of all time
Author: lubo601 | 9:54 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 8:17 PM | No မှတ်ချက် |
Myanmar Ask Online News
ကောင်လေးက သူ့ချစ်သူကောင်မလေးဆီ sms ပို့လိုက်တယ်။
Boy ။ ။ Hi Baby!! .. နေကောင်းရဲ့လား?? ငါတော့ ဒီနေ့ အရမ်းပျော်နေတယ်!!
Girl ။ ။ နေဦး, ခဏနေမှ sms ပို့ရအောင် … ငါဒီမှာ Thesis အတွက် ခေါင်းရှုပ်နေလို့
Boy ။ ။ အဲ့ဒါကို နောက်မှလုပ်လို့မရဘူးလား? ငါ နင့်ကို အရမ်းလွမ်းနေလို့ …
ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် လိုအပ်ချက် (၈) ချက်
Author: lubo601 | 8:16 PM | No မှတ်ချက် |
(၁) နိုးကြားတက်ကြွမှု အပြည့်ရှိပါစေ။
ဖခင်တွေဟာ ကလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကလေးကို ထိန်းခြင်းနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာ မိခင်တွေရဲ့ အလုပ်ပဲလို့ထင်ပြီး မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးငယ်နဲ့သင့်လျော်တဲ့ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် မှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်အောင် ဖခင်တွေအနေနဲ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်လက်ထဲမှာ ကလေးငိုနေလျှင် သင်၏ ဇနီး စိတ်ချလက်ချနေနိုင်အောင် ဖြေသိမ့်စကားပြောသင့်ပါတယ်။
Happy Mom Pregnancy Pillow
ကလေး မွေးရတယ်ဆိုတာ တကယ်နာပါတယ်။ သားအိမ် ကြွက်သားတွေဟာ စိတ်ကနေ ထိန်းမရဘဲ မွေးခါနီးရင် ညှစ်လို့ နာရတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအနာမျိုးကို Painkillers အနာသက်သာဆေးတွေက မနိုင်ဘူး။ ဘိန်းပါတဲ့ Morphine အုပ်စုဆေး ကသာ ထိရောက်တယ်။ မွေးဖွါးဖြစ်စဉ် အစောပိုင်းမှာသာ သုံးရပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များလှတယ်။ သိပ်မသုံးကြပါ။
ကျွန်တော် ကြံ.ခိုင်ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီထဲသို.၀င်တော.မည် ။ ဘယ်သူတွေဘာထင်ထင် ကျွန်တော်ဝင်မည် ။ ဒီခေတ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုတော.နောက်ခံရှိထားမှဖြစ်မည် ။ သူများတွေဝင်သောပါတီထဲသို.လည်း အုတ်အရောရောကျောက်အရောရော သူများလုပ်တိုင်းလိုက်လုပ်ကာ ရောတိရောရာ မလုပ်ချင် ။ ကိုယ်ထင်တာကိုယ်လုပ်တာကျွန်တော်.၀ါသနာဖြစ်သည် ။ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီ ကိုကျွန်တော်ကြိုက်သည် ။ ယခင်ပါတီဥက္ကဌဦးသိန်းစိန်သည် လာဘ်မစားဘူးဟုနာမည်ကျော်ကြားသော Mr. Clean ဖြစ်သည် ။ ယခုပါတီဥက္ကဌဖြစ်သူ၊ သူရဦးရွှေမန်းသည် တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မည်.သူတစ်ဦးဖြစ်သည် ဟုကျွန်တော်ယုံသည် ။
Wai Lin Aung
fb ပေါ်မှာတတ်လာတဲ့ ညည်းတွားသံလေးတွေ
ငါ့ကြမှဖြစ်ရတယ်လို့ ------- အစရှိသဖြင့်
သင်၏မျက်လုံး အားပြန်ကောင်းပြီး " မျက်မှန်လွတ်တဲ့နည်း "
Mitta Online Service
ပထမဦးဆုံး အိပ်ရာကနိုးပြီးပြီးချင်း ၊ မျက်နှာကိုအရင်မသစ်ရဘူး ၊
ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံး ဒူးအထက်ကနေပြီး ရေသုံးခွက်စီလောက်
လောင်းပေးရမယ် ။ ဒါက တစ်ကိုယ်လုံးမှာပြန့်နှံနေတဲ့ အပူခိုးတွေကို
ခြေထောက်ရောက်သွားအောင် ဆွဲချလိုက်တာပါ ။ ။ ။
Author: lubo601 | 8:09 PM | No မှတ်ချက် |
ဒေဝဒတ်သည် သံဃာတော်ကို သင်းခွဲပြီးလျှင် ငါးရာသော ရဟန်းတို့ကို ခေါ်ယူ၍ ဂယာသီသ၌ နေလေ၏။
ထိုအခါ သဗ္ဗညုဘုရားရှင်က သာရိပုတ္တရာ, မောဂ္ဂလာန်တို့ကို စေ၍ ရဟန်းတို့ကို ခေါ်ယူစေလျှင် ရှင်ဒေဝဒတ်သည် အိပ်ပျော်၍ နေရကား ကောကာလိကသည် လာပြီးလျှင် -
“ငါ့ရှင် ဒေဝဒတ် ... ထလော့၊ သင်၏တပည့်တို့ကို သာရိပုတ္တရာ, မောဂ္ဂလာန်တို့သည် ခေါ်ယူသွားလေပြီ။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၀-၄)
Author: lubo601 | 8:07 PM | No မှတ်ချက် |
ကျောက်တော်မြို့နယ် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ရိက္ခာလို
ခေါင်းဆောင်များ လွတ်မြောက်ရေး အလုပ်သမားများ ဆုတောင်းပွဲလုပ်
ပန်းဆေးပြည်သူ့စစ်နှင့် တအာင်းတပ် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
ပြန်ကြားရေး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်အဖြစ် ဦးတင့်ဆွေကို ခန့်အပ်
၄၆ ဘီလျံ မြှုပ်နှံဖို့ တရုတ် သမ္မတ ပါကစ္စတန် ရောက်ရှိ
အခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်းကို ထိုင်းအစိုးရ စတင် ဆွေးနွေး
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်တွင် မုန်တိုင်း သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
မန္တလေးတွင် အိမ်ခြေ ၂၀ ကျော် မီးလောင်
မြန်မာကြောင့် သံဖြူဈေးတွေ ကျဆင်း
ဌာနေပြည်သူ့စစ်များ ဦးဆောင်ပြီး သင်္ကြန်ပွဲတော်နေ့များ၌ မူစယ်မြို့တွင် လောင်းကစားဝိုင်းများ ဖွင့်လှစ်
နိုင်ဂျီးရီးယားမှာ လူ ၁၈ ဦး အဆိပ်အတောက်ဖြစ် သေဆုံး
တောင်အာဖရိက လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ သေဆုံးသူ ၈ ဦးရှိ
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲ အကျအဆုံး အစိုးရ စစ်တပ် ထုတ်ပြန်
မလေးရှားရောက် ဒုက္ခသည် ကလေးငယ်တွေ ပညာရေး အခက်တွေ့
လစ်ဗျားနားမှာ လှေကြီးမှောက် ၇၀၀ လောက်သေ
သံတွဲမှာ ဒေသခံ တွေနဲ့ ရွှေ့ပြောင်း ရေလုပ်သားတွေ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွား
လူသတ်မှုကျူးလွန်သူ လေးဦးအနက် နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိ
ခါးအောက်ပုိုင်း နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း (သို့မဟုတ်) ...
Queen - Live At Wembley Stadium (full version) - B...
Htoo Eain Thin (စိမ်းရက်လေအား) By ၀င့်ဝါ (cover)
ကျနော်တို့က နောက်တတ်ပြောင်တတ်တာတော့ မျိုးနဲ့ရိုးနဲ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၉-၄)
လုပ်တာ အပြစ်လား မလုပ်တာ အပြစ်လား
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၈-၄)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၇-၄)
~ အရှင် ~
အဟောင်းကနေ အကောင်းဖြစ်အောင် အညစ်ကနေ အသစ်ဖြစ်အောင် ...
"အသုံးဝင်သော နှစ်လုံးတွဲ အင်္ဂလိပ်စကားတိုလေးများ "
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၅-၄)
ကိုယ့်ခေါင်းကို ကိုယ်တိုင် ရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့နေ့
အဆောက်အဦးတစ်ခု တရားဝင်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်...
အမူးသမား ၄၃ ပါး..အများ..သိစေအပ်
“အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးဆုံချက် ...
ဖာသည်ဟာ ငါ့နှမ - လင်းထင်
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၃-၄)
ဟာသ စုစည်းမှု (၁၂-၄)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၂-၄)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၁-၄)